कंचन विद्या मन्दिरमा जितेर छोड्छौं – क्रान्तिकारी – ToplineKhabar
February 23, 2017 February 24, 2017 प्रदीप भट्ट0Comment
प्रदेश नम्बर ७, महाकाली अञ्चल बैतडी जिल्लामा जन्मनु भएका निरज राज कपाडी (भट्ट) कक्षा आठ देखिनै अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन ( क्रान्तिकारी ) मा आवद्ध भएका थिए । उनी सानै उमेर देखि अरुलाई सहयोग गर्न, सामाजिक क्रिर्याकलापमा भागलिने आत्मीय र दयालु स्वभावका युवा पुस्तामा चिरपरिचित छन । कपाडी बैतडीमा जन्मेका भएपनि बसोबासका हिसावले कंचनपर जिल्ला सदरमुकाम महेन्द्रनगर जानकी टोल निवासि हुन । कपाडी कंचन विद्या मन्दिर अखिल क्रान्तिकारी इकाई कमिटी अध्यक्ष हुदै स्नात्तक तह चौथो बर्षमा अध्ययनरत छन । उनको लगाव र इमान्दारीका कारण स्नात्तक तहमापनि अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन । उनी कंचनपुर जिल्ला अखिल क्रान्तिकारी सचिवालय सदस्यपनि हुन । यहि फागुन १४ मा हुन लागेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियको चुनावमा माओवादी निकट भातृ संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी ) बाट सचिव पदमा उमेदवारी दत्र्ता गराइ क्रान्किारीको प्यानल सहित जित्ने दाबी गरेका कपाडी (भट्ट)संग टपलाईन खबरका लागि प्रदीप भट्टले गरेको कुराकानी –
– स्ववियु निर्वाचनको माहोल कस्तो बन्दै गइरहेको छ ?
अव चाहिँ स्ववियु निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्ने आधार सिर्जना भएको छ । हिजोको दिनमा निर्वाचन होला कि नहोला भनेर शंका गर्ने ठाउँहरु प्रशस्तै थिए । विभिन्न विद्यार्थी संघ संगठनले आफ्ना मागहरु राख्दै निर्वाचन भाँड्न खोजिरहेका थिए । त्यो असहज वातावरण अन्त्य भएको छ भने यही १८ गते बुधबार निर्वाचन हुने पक्का पक्की जस्तै भएको छ ।
– अखिल क्रान्तिकारीको अवस्था कस्तो छ ?
अखिल क्रान्तिकारीको अवस्था अहिले निकै बलियो बन्दै गइरहेको छ । हामी धेरै ठाउँमा निर्वाचन जित्छौं त्यो अनुसार गृहकार्य भइरहेको छ । हिजोको दिनमा पनि हामी पूर्ण रुपमा तयारीमा थियौं । निर्वाचन हुन सकेन हामीलाई दुःख लागेको छ । अरु विद्यार्थी संगठनलाई हामीलाई आरोप लगाएर आफूहरु पन्छिन खोजे त्यसमा मेरो आपत्ति छ । हामीले कहिले पनि परिणामलाई पूर्व अनुमान लगाएर निर्वाचन भाँड्ने प्रयास गरेनौ । हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले देशको राजनीतिमा खेलेको भूमिका पनि अहिले अत्यन्त सकारात्मक छ त्यसो हुँदा पनि हामीप्रति विद्यार्थीको सद्भाव रहनेछ भन्ने विश्वास लागेको छ । हिजो संविधानसभामा पहिलो पार्टी हुँदा माओवादीले जेजति गरेको छ त्यो पनि अझै स्मरणयोग्य नै छ । आज संविधानसभामा तेश्रो पार्टी बन्दा पनि हामीले कुनै मोलमोलाई नगरीकन राष्ट्रिय राजनीतिलाई सहज रुपमा स्वीकार्ने बचनबद्धता व्यक्त ग¥यौं । माओवादीले देशमा अस्थिरता मच्चाउँदै आयो भन्ने आरोप पनि सहेका हौं । जसले जे भनेपनि माओवादी केन्द्र जनताको पार्टी हो र त्यसको विद्यार्थी संगठन हामी अखिल क्रान्तिकारी कहिले पनि र काहिँ पनि भागेर वा लुकेर जनतालाई दुःख दिएर राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौं ।
कंचन विद्या कलेजमा जित्ने आधार के छ ?
स्वतन्त्र विद्याथी युनियन भनेको विद्यार्थीको साझा संस्था हो । यसमा भोट दिने व्यक्तिहरु चानचुने सोच भएका हुँदैनन् । कसैको करकाप र धम्कीले विद्यार्थीहरुको मत दायाँबायाँ गर्न सकिँदैन । यदी कसैले यस्तो सोचेको छ भने त्यसको सपना मात्र हुनेछ । हामी विद्यार्थीमाझ आफ्ना कुराहरु प्रष्ट रुपमा राखेर जान्छौं । जे गर्न सकिन्छ त्यो भन्छौं नचाहिँदा आश्वासन देखाएर विद्यार्थीको मत लिने हाम्रो प्रयास रहनेछैन र त्यसो गर्नु आवश्यकता पनि छैन । हामीले कंचन विद्या क्याम्पसमा विद्यार्थीका हकहितका पक्षमा गरेका कामहरु शैक्षिक र प्राज्ञिक आन्दोलनका कुराहरु विद्यार्थीलाई अनुशासन बनाउने कुराहरु र समग्र राजनीतिमा क्रान्तिकारीले खेलेको भूमिका नै हाम्रा जितका आधार हुन् । हामी काम गर्छौ तर अरु जस्तो सस्तो प्रचार गरेर जान सक्दैनौ । यो हाम्रो कमजोरी हो । यो बेलामा यही हाम्रो कमजोरीलाई आधार बनाएर अरु संघ संगठनले हामी विरुद्ध गलत भ्रमहरु पनि फैलाउन खोजेका छन् । निर्वाचनको परिणाम आएपछि ती सबै भ्रमहरु चिरिन्छन् र अखिल क्रान्तिकारीले कंचन विद्या क्याम्पसलाई एउटा नयाँ सोचका साथ अघि बढाउने योजना बनाएको छ ।
– उम्मेदवारी छनौटमा केही समस्या भयो कि ?
हामी सर्वसम्मत रुपमा उम्मेदवार छान्ने प्रयासमा थियौं र त्यो सफल पनि भएको छ । सबैभन्दा पहिले नै हामीले क्याम्पसमा कमाण्डर तोक्यौं र अरु संगठनभन्दा पहिले नै सबैजसो क्याम्पसमा सभापतिको उम्मेदवार छान्यौं । यो जुन गतिले अघि बढीरहेका छौं त्यो पनि एउटा राम्रो पाटो हो । नेपाल विद्यार्थी संघ र अनेरास्ववियुले अहिलेसम्म पनि आफ्नो प्रष्ट मार्गचित्र तयार गर्न सकेका छैनन् । उनीहरुबीच अझै पनि विवाद छ । उम्मेदवार कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा ठुलै लडाई चल्न थालेको छ । विद्यार्थीको साझा थलोलाई बदनाम गर्ने काम कतैबाट हुन्छ भने त्यो हामीलाई मान्य हुनेछैन । स्ववियुको अस्तित्वमा नै आँच आउने खालका पनि कतिपय कुराहरु पछिल्लो समयमा आएका छन् । लामो समयदेखि निर्वाचन नभएको हुँदा यो अवसरलाई हामीले लिन सक्नुपर्छ । यदी यो मौका पनि गुमाइयो भने अनन्तकालसम्म निर्वाचन नभएर स्ववियुको अस्तित्व नै रहने कि नरहने भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा हुनसक्छ ।
तपाइको योजनाहरु के–के छन् ?
 भ्रष्ट प्रशासकलाई क्याम्पसबाट सधैकालागि कानुनबमोजिम कार्वाहि गरि निस्कासन गरिने छ ।
 विद्यार्थी अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गरिने छ ।
 विद्यार्थीलाई रोजगारमूलक शिक्षा दिनकालागि विशेष पहल गरिनेछ ।
 कंचन विद्या क्याम्पसको एउटा कोठादेखि शौचालयसम्म सुधार गर्ने र भौतिक पूर्वाधार विकास, विद्यार्थीहरुको पुस्तकालयदेखि कक्षाकोठासम्म सबै कुराको सुधार गर्ने काम गर्ने योजना सहित अगाडि बढेको छु ।
 छात्रवृत्ति कोष स्थापना गरि जेहेन्दार, गरीब, मधेशी, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, छात्रा तथा दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरुमध्ये क्रमशः प्रथम, दोश्रो, तेश्रो र चौथो बर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई आंशिक छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ ।
 सबै शंकाय र विषयका पुस्तकहरु तथा नोटहरु पाइने लाइब्रेरी र इलाइब्रेरीको व्यवस्था गरिनेछ ।
 विद्यार्थीको अनुपातमा प्रशस्तै मात्रामा प्राध्यापकको व्यवस्थापन गरिनेछ ।
अखिल क्रान्तिकारीले ल्याएको २८ बर्षे उमेर हदबन्दी र मिश्रीत प्रणालि तपाईलाई कस्तो लाग्छ ?
अखिल क्रान्तिकारीले ल्याएको २८ बर्षे उमेर हदबन्दी र मिश्रीत प्रणलि एकदम स्वागत योग्य छ । यो स्वगत योग्य मात्र नभई वैज्ञानिक पनि छ । विद्यार्थीको नेतृत्व विद्यार्थी स्वयमले गर्नु पर्दछ । यो निर्णयले विद्यार्थी राजनीतिमा देखिएको अवरोध हट्ने छ । समयमै निर्वाचन हुनेछ । विद्यार्थीका समस्या विद्यार्थीले नै बुझनेभएकाले नियमित विद्यार्थी भित्रकै नेतृत्व आजको आवश्यकता हो ।
२८ बर्ष लागुहुनु हुदैन भन्ने एक थरिको भनाई छनि यो के हो फेरी ?
साँच्चिकै एक समुह पिडित छ । २८ बर्ष लागुहुनु हुदैन भनेर उपत्यकाका विभिन्न क्याम्पसहरुमा तालाबन्दी गरिराखेको छ । यो संगठनको तालाबन्दी नभई एक समुहको तालाबन्दी हो । यसले केहि असर पादैन । संगठनको निर्णय सबैले स्विकार गर्नु पर्दछ ।
त्यसो भए क्रान्तिकारी जित्छ भन्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ ?
म एकदम विश्वस्त छु । क्रान्तिकारी त्याग र बलिदान बाट जन्मेको संगठन हो । हामि हावादारी खोक्रा गफ भन्दा काममा विश्वास गछौं । एमालेको मौसमि राष्ट्रवाद जस्तो होईन, यो बझ्न जरुरि छ । जस्को निती उसको नेतृत्व भएकाले यस पटक हामी जित्नेमा ढुक्क छौं ।
← ‘एक दिनका लागि’ संशोधन विधेयकमाथि छलफल गर्न दिने एमालेको घोषणा
शिवालयमा दर्शनार्थीको घुइँचो, यस्तो छ पशुपतिको चहलपहल →